Ny zanakalahin'i Ted DiBiase dia niaiky ny heloka noho ny fisolokiana tamin'ny raharaha fanodinkodinam-bolam-panjakana lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny fanjakana - Wwe
'The Million Dollar Man', zanakalahin'i Ted DiBiase, Brett DiBiase, dia niaiky ny heloka vitany tamin'ny famoronana fanambarana hosoka tamin'ilay nantsoina hoe raharaha fanodinkodinam-bolam-panjakana lehibe indrindra any Mississippi.
Brett dia iray tamin'ireo olona enina voasambotra tamin'ny volana feb. DiBiase sy ny olon-kafa vitsivitsy dia voampanga ho niray tsikombakomba tamin'ny fanodikodinana ny Sampan-draharaha misahana ny maha-olona ao Mississippi.
ny fomba ahazoana vady avy amin'ny vehivavy hafa
Araka ny nambaran'i WLBT , ilay mpiady ady amin'ny taranaka fahatelo teo aloha dia nanao fanambarana diso sy hosoka maro fa hahazo fandoavana $ 48,000 amin'ny maha-orinasa Restore2, LLC azy.
Ny valin'ny fanadihadiana dia nanambara fa nandoa vola DiBiase hanamorana ny kilasy momba ny fidorohana zava-mahadomelina. Na izany aza, tsy nanana ny kilasy velively i DiBiase satria tao amin'ny trano famerenana amin'ny laoniny lafo vidy any Malibu, California izy, notsaboina noho ny fanararaotana poizina.
Ireo mpiasan'ny DHS teo aloha dia voampanga ho namorona faktiora ho an'ny fandoavam-bola DiBiase. DiBiase koa dia voampanga amin'ny fanampiana manarona ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny fisandohana bokotra, faktiora, boky ary antontan-taratasy. DiBiase dia iray monja amin'ireo voampanga marobe tamin'ny raharaha fanodinkodinam-bola be satria ny olona enina voarohirohy tamin'ny raharaha dia nanandrana nanodinkodina vola maherin'ny $ 4 tapitrisa an'ny governemanta.
Ny auditoram-panjakana Mississippi State Shad White dia namoaka izao fanambarana manaraka izao:
'Miarahaba ny asan'ny mpisolovava ao amin'ny Distrika Owens sy ny ekipany izahay sy ny oloko noho ny asany amin'ity raharaha ity. Ity fangatahana heloka bevava ity dia maneho dingana iray hafa manandanja amin'ny fanatanterahana ny fahamarinana ho an'ireo mpandoa hetra sy ireo iharan'izany. '
Mpanoratra Anna Wolfe an'i Mississipi androany dia nizara antsipiriany momba ny fiangavian'i Brett DiBiase. Rehefa niaiky heloka noho ny hosoka i Brett DiBiase dia nesorina ny fiampangana azy. Hanampy ny fanjakana ihany koa izy amin'ny tranga ambiny. Nanaiky ihany koa i DiBiase fa hamerina amin'ny laoniny ny vola azony, miaraka amin'ny fandoavana $ 5,000.
Tsara homarihina ihany koa fa nahemotra ny fanamelohana an'i DiBiase.
Brett DiBiase dia niaiky ny helony noho ny fanaovana fanambarana tsy marina. Izy no mpiady mpiady taloha izay voampanga ao amin'ny antsoin'ny @MSStateAuditor ho raharaha fanodinkodinam-bolam-panjakana lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny fanjakana. Ny fijanonany amin'ny famerenana amin'ny laoniny zava-mahadomelina dia voalaza fa naloan'ny vola dolara #TANF. Ny fiampangana dia mitentina 48000 $ azony tamin'ny fifanarahana nifanaovany tamin'i @MS_DHS ho an'ny asa tsy vitany. Amin'ny fiampangana ho meloka amin'ny fisolokiana dia nesorina ny fiampangana ny tsikombakomba. Nanaiky izy hanampy ny fanjakana amin'ny raharaha sisa tavela. Nahemotra ny sazy. Nanolotra $ 5k famerenana amin'ny laoniny koa izy androany. Maniry aho fa afaka milaza fa $ 5,000 dolara fanampiana (avy amin'ny $ 94 tapitrisa amin'ny fividianana mampiahiahy) naverina androany, fa any Mississippi, ny fandoavana ny famerenam-bola dia mandeha aloha mba handoavana ny vidin'ny fitsarana alohan'ny handoavana ny vola amin'ireo traboina.
FAMORIANA: Brett DiBiase dia niaiky ny helony noho ny fanaovana fanambarana tsy marina. Izy no mpiady mpiady taloha izay voampanga ao anatin'izany @MSStateAuditor miantso ny tranga fanodinkodinam-bolam-panjakana lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny fanjakana. Ny fijanonany amin'ny famerenanana zava-mahadomelina dia voalaza fa naloany #TANF dolara fifanampiana. pic.twitter.com/pf1FtC2h4G
- Anna Wolfe (@ayewolfe) 17 Desambra 2020
Ny fiampangana dia mitentina 48000 $ azony tamin'ny fifanarahana nifanaovany @MS_DHS ho an'ny asa tsy vitany.
Amin'ny fiampangana ho meloka amin'ny fisolokiana dia nesorina ny fiampangana ny tsikombakomba. Nanaiky izy fa hanampy ny fanjakana amin'ny raharaha sisa tavela. Nahemotra ny sazy. Nanolotra $ 5k famerenana amin'ny laoniny koa izy androany.
Maniry aho fa afaka milaza fa $ 5,000 ny dolara fanampiana (avy amin'ny $ 94 tapitrisa amin'ny fividianana mampiahiahy) naverina androany, fa any Mississippi, ny fandoavana ny famerenam-bola dia mandeha aloha mba handoavana ny vidin'ny fitsarana alohan'ny handoavana ny vola amin'ireo traboina.
ahoana no tsy hiraharaha ny hafa
Brett DiBiase's WWE milahatra
Brett DiBiase dia talenta WWE Developmental teo aloha tany FCW teo anelanelan'ny 2008 sy 2011. Brett dia nihazona ny Tompondakan'ny ekipa FCW Tag Team Championship niaraka tamin'i Curtis Axel, ary ilay duo dia niara-nantsoina hoe The Forgotten Sons tao FCW. DiBiase nisotro ronono tamin'ny fifaninanana anaty fifaninanana noho ny olana miverimberina amin'ny lohalika taona maro lasa izay. Brett DiBiase dia zandrin'i Ted DiBiase Jr, ary samy nampiditra ny rainy tao amin'ny Hall of Fame WWE izy ireo tamin'ny martsa 2010.
inona no dikan'ny hoe maso amin'ny lehilahy
hiverina any wwe ve i goldberg?
mahatsiaro voafandrika aho amin'ny fiainako
niainga ny olona rehefa manomboka ny fitiavana
ahoana ny fomba hisarihana ny sainy rehefa tsy miraharaha anao izy